नेपाल लाइभ आइतबार, पुस २७, २०७६, १०:४७
काठमाडौं- राजा भएको र राजकूलमा जन्मेका कारणमात्रै पृथ्वीनारायण शाह सम्मानित र तारिफयोग्य पात्र बनेका होइनन्। उनको योगदानलाई छायाँमा पार्ने र विस्तारवादी, नश्लवादी एकल धर्म सम्प्रदायको वर्चस्व भएको राज्य निर्माणको दोष र अत्याचारी शासकको रूपमा चित्रित गर्ने अभियान अतिवादी र धरातलीय यथार्थलाई आँखा चिम्लने धृष्टतामात्रै हो।
जित्नेले आफूअनुकूल केही प्रभाव, छाप र निर्णय गराउने स्वाभाविक प्रक्रियालाई तत्कालीन चेतनाको आँखाबाट हेर्ने हो भने अस्वाभाविक प्रभुत्व जमाएको भनेर आरोप लगाउन इतिहास पढ्दा तर्क भेटिएन। यसर्थ पृथ्वीनारायण दूरदर्शी राजामात्रै नभएर लडाकू र राजनीतिज्ञ पनि थिए। त्यसैले उनको सम्मान वर्तमान नेपालको पनि सम्मान हो।
चिनियाँ लोककथन यहाँ सान्दर्भिक छ– ‘तिमीले जुन पोखरीको पानी खान्छौ त्यसको निर्मातालाई सम्झने पनि गर ।’ अर्थात् कृतज्ञ हुनु गुणग्राहीप्रति नतमस्तक हुनु मानव प्राणीको नैसर्गिक गुण र स्वभाव हो। चिनियाँ लोकोक्ति र हाम्रै समाजको दृष्टान्तबाट पनि हामी भन्न सक्छौं, हाम्रा पुर्खाको पौरख र उपलब्धि उपभोग गर्दा ती पौरखी पूर्वजप्रति आदरभाव राख्ने उचित सम्मान दिने र सदा स्मरण गर्ने कार्यबाट हामी विमुख हुन सक्दैनौं। त्यसो गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन र त्यो हाम्रो संस्कृति पनि होइन।
लोकहीत र कल्याणका लागि भनेर धारा, कुवा बनाउने, चौतारो निर्माण गर्ने, वरपीपल रोप्ने हाम्रा पुर्खाको समाजमा नाम लिने चलन आज पनि छ। गुणग्राही बन्नु, कृतज्ञ हुने मानवजातिको संस्कार हो। झन् हामी नेपालीमा त्यो कृतार्थ भाव धेरै हुनु वैदिक र सनातन संस्कृतिको सन्तति हुनुको कारण हो। प्रमाण हो।
पुस २७ को पृथ्वीजयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस केही वर्षदेखि छायाँ र विवादमा छ। राज्यका तर्फबाट औपचारिक बिदा दिन छाडिएपछि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको महत्व र गरिमामा अनेकन कोणबाट बहस र छलफल भएका छन्। राज्यले गणतान्त्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछि पूर्वराजाको रुपमा मात्रै हेरेर पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको अवमूल्यन भएको धेरैको ठहर छ।
वौद्धिक वर्ग र इतिहासकारहरु इतिहासलाई अवमूल्यन गरेकोमा खिन्न देखिन्छन्। बिदा दिएर फगत औपचारिकतामात्रै निर्वाह गर्नु र कसैको योगदान, गौरव र पुरुषार्थप्रति अनुग्रहित हुनु बेग्लै कुरा हो। राज्यले दिने औपचारिक बिदाभन्दा ठूलो कुरा हो सम्मानको संस्कृति।
पूर्वजप्रति कृतज्ञ हुने असल मान्यता र परम्पराबाट कतै हामी भाग्दै त छैनौं? आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराले सिकाएका असल कुरा बिर्सेर गलत बाटो र भ्रस्टीकरणतर्फ त देशलाई हिडाईं राखेका त छैनौं? ख्याल गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने कुरा यही हो।
राजा भएकै कारण पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको अवमूल्यन गर्नु भनेको आफ्ना पितापुर्खाले राज्य निर्माणमा गरेको योगदान र बलिदानप्रति बेइमान हुनु हो। गौरवको इतिहासलाई खुम्च्याउनु हो। माटोको मायालाई लत्याउनु हो। आमाको ममताप्रति प्रश्न उठाउनु हो। बाबुको काँधलाई होच्याउनु हो। आफूले फेरेको श्वासप्रति अनविश्वास प्रकट गर्नु हो।
जसले जे भने पनि, जस्तो आरोप लगाए पनि राजा पृथ्वीनारायण शाहको तत्कालीन निर्णय दूरगामी अनि नेपाल र नेपालीको हितको खातिर नै थियो छ र रहनेछ। भलै राजा हुनुको नाताले उनको महत्वाकांक्षी योजना र शक्तिशाली देशको राजा हुने चाहना पक्कै पनि एकीकरणको कारक तत्व हो।
तथापि, उनको सपनाले नेपाल निर्माण गर्यदो। २० वर्षको उमेरमा राज्य एकीकरणको नेतृत्व गर्ने राजा असामान्य रणकौशल भएका कारण नै आधुनिक नेपालको एकीकरण सम्भव भयो। विशाल राष्ट्रको चक्रवर्ती सम्राट बन्ने सपना एक राजकुमार हुनुको नाताले नै सम्भव भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन।
पृथ्वीनारायण शाहको नायकत्वमा हाम्रा वीर पुर्खाको योगदानलाई विस्मृतिमा राख्न सकिन्न। पृथ्वीनारायण शाहसँगै हाम्रा पुर्खाको स्मरण आजको आवश्यकता हो। आजको पुस्ताले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र बझाउनुपर्ने तथ्य के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गरेर आफूले होचो भएको महसुस गर्नु पर्दैन। अरुको सम्मानले आफ्नो पनि सम्मान अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न कथित क्रान्तिकारी नेता र कार्यकर्ताले जरुरी छ।
इतिहास बिगारेर, अपव्याख्या गरेर, अवमूल्यन गरेर वर्तमानमा कहीँ पुगिँदैन। इतिहास गलत गर्नेको पनि हुन्छ र लेखिन्छ। सही र गलत कुन हो? छुट्याउन पनि इतिहासको उज्यालो र अँध्यारो दुवैपक्ष जान्न आजको अध्ययनले खोज्दछ। अँध्यारो भएर नै उज्यालोको महत्व बढ्छ। तसर्थ इतिहास मेट्ने र पुछ्ने घाती वुद्धि कसैको पनि नभएकै राम्रो।
नेपाल राज्यको एकीकरण तत्कालीन आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सही थियो। सही समयमा सही मान्छेको नेतृत्वमा थियो भन्ने कुराको पुष्टि हुन कुनै प्रमाण र आधार जुटाउनु पर्दैन। जे छ देश नै प्रमाण हो। देशको आजको अस्तित्व र पहिचान नै काफी छ। बहुआयामिक र कुशल रणनीतिक खुबीका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह बहुत चतुर र समय परिस्थितिको आँकलन गर्ने व्यक्ति थिए।
देश बनाउन कसै न कसैको महत्वाकांक्षी योजना साहस, संकल्प र दुरदर्शीता चाहिन्छ नै। जसरी नेपाल एकीकरण तत्कालीन आवश्यकता थियो, त्यसरी नै राजा पृथ्वीनारायणको नायकी तत्कालीन अपरिहार्य आवश्यकता थियो। आजको युग चेतनाका दृष्टिकोणबाट तत्कालीन समयका कतिपय ज्यादती सह्य देखिँदैन तर महान उपलब्धि पछाडिका केही कमजोरी र त्रुटिलाई आजको परिवेशसँग दाँजेर हेर्न सकिन्न विस्मृतिको गर्तमा हत्याउनै पर्छ।
विश्व परिस्थिति नै युद्धमय थियो। नेपाल एकीकरणको वस्तुगत आधार पनि युद्धमय विश्वमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि बलियो भएर बस्नु पर्ने थियो। स(साना टुक्रे राज्य सधैं एकआपसमा टकराएर बस्नुपर्ने भय, अन्योल र युद्धमा जीवन व्यतित गर्नुपर्ने त्यो समाजको मनोविज्ञान पृथ्वीनारायण शाहले राम्रोसँग बुझेका थिए।
त्यतिबेला बेलायतको बढ्दो सैन्य शक्तिको त्रास र उन्माद विश्वभर व्याप्त थियो। रुस र पर्सियाबीचको युद्ध, अंग्रेज र स्पेनबीचको युद्ध, रुस र टर्कीबीचको घमासान लडाइँ, चीनका प्रभावशाली सिङ लङ बादशाहको राज्य विस्तारको अभियान, हिन्दूस्तानमा मुगलहरुको दयनीय स्थिति र टुक्रा-टुक्रा भएर रहनुको विषम परिस्थिति, त्यति नै बेला हिन्दूस्तानलाई आफ्नो आधिपत्यमा राख्ने चतुर बेलायती साम्राज्यको तयारीजस्ता कारण पनि आफू बलियो भएर रहन आफ्नो वरपरका सबै राज्य एक बनाएर राख्ने सपना बुनेका थिए, पृथ्वीनारायण शाहले।
आजको प्रजातान्त्रिक युगको चेत र तत्कालीन चेतलाई सँगै राखेर दाँज्न सकिन्न। तर पनि यदाकदा शासकहरु दिग्भ्रमित हुँदा, पृथ्वीनारायण शाहको एेतिहासिक योगदानलाई कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ। अनेक भ्रामक र कल्पित आरोप लगाएर देश एकीकरण गर्ने नायकलाई अपमान गर्ने, थुक्ने र घृणा फैलाउने, शालिक तोड्ने जुन अवान्छित कार्य हुँदै आएको छ, एक सच्चा नेपालीका लागि त्यो सहन गर्न सकिने विषय होइन।
मन नलागे नलाई नमान्न पाइन्छ। तर, थुकेर घृणा गरेर अर्को पक्षलाई उत्तेजित पार्नुहुँदैन, मिल्दैन र त्यो सर्वथा निन्दनीय कुरा हो।
युद्धका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको पक्षबाट पनि कमजोरी भए होलान्। त्यसलाई नकार्न सकिन्न। तर, सजायँस्वरूप १७ धार्नी नाक-कान काटेर कीर्तिपुरेहरुको बिजोग बनाएको कुरा चर्को गरी चल्छ। जसको तर्क न्यायोचित लाग्दैन। के त्यतिबेलाको जनसंख्या अनि सैनिक संख्या त्यो १७ धार्नी नाक–कान काट्न पुग्ने थियो होला? अनि राज्यमा भएभरका सबैको नाक-कान काट्नुपर्ने यथेस्ट कारण केवल अत्याचारका लागि मात्रै हो त?
पृथ्वीनारायण शाहको सट्टा त्यतिबेला जुन राजाले एकीकरण गरेको भए पनि राष्ट्रनिर्माता मान्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुने थिएन। किनकि यहाँ कामको गुणको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी होस्। हामीले चाहेको यही हो।
को राष्ट्रनिर्माता भयो, कुन कूल वंश परम्पराले त्यसको नेतृत्व लियो? त्यो ठूलो कुरा भएन। कसले राष्ट्र निर्माण गर्‍यो, महत्वपूर्ण त्यो हो।
पुस २७ गते राज्यले औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने संकल्प गरेर २००९ देखि आफ्नो नेतृत्वमा योगी नरहरिनाथले जुन पुण्य कर्म र संकल्प गरे, त्यो नाजायज कहीँकतैबाट पनि देखिन्नँ। देशको जग बसाल्ने परम्परागत धर्म संस्कृति र धरोहरको रक्षा नै देशको भावनात्मक एकताको सेतु हो।